“့မွေးနေ့ရှင် ဖြစ်တဲ့ သူမရဲ့ မိခင်အတွက် ထူးထူးခြားခြားလေး မွေးနေ့ဆုမွန်တောင်းပေးခဲ့တဲ့ နီနီခင်ဇော်” – Cele Snap
ပရိသတ်ကြီးရေ အသံကောင်းသူ အဆိုတော်မလေး နီနီခင်ဇော်ကိုတော့ အထူးအထွေ မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုအောင် ချစ်ခင်ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်.။ နီနီခင်ဇော်ကတော့ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲမှာ Winner ဆုကို ရရှိခဲ့ပြိးနောက်မှာ အောင်မြင်သူ အဆိုတော် တစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုတွေကို ရရှိပိုင်ဆိ်ုင်ထားသူပဲဖြစ်ပါတယ်နော်.။
နီနီခင်ဇော်ကတော့ သူမရဲ့ တမူထူးကာ ကောင်းလွန်းတဲ့ အသံနဲ့ သီချင်းကောင်းများစွာကို သီဆိုခဲ့ပြီး ထွက်သမျှ သီချင်းတိုင်းကလည်း ပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားလူကြိုက်များခဲ့တာချည်းပါပဲနော်.။ သီချင်းကောင်းတွေကို အမြဲ ချပြသူ အဆိုတော် ဖြစ်သူ နီနီကတော့ The Voice Myanmar သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲအစီအစဉ်ရဲ့ ဒိုင်လူကြီးတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့လည်း လုပ်ဆောင်နေသူပါ. ။.
နောက်တက်လာသူ ဂီတ ညီအစ်ကိုမောင်နှမ အားလုံးကို လက်တွဲခေါ်ကာ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် တွဲခေါ်သူ စီနီယာကောင်းဖြစ်သူ နီနီကတော့ ဒီကနေ့မှာကျရောက်တဲ့ သူမရဲ့ မိခင်အတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းလေးကို “Happy birthday မေမေ” ဆိုပြီး သူမရဲ့ My Day မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်.။
မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့ သိပ်မချတတ်သူ နီနီခင်ဇော်က ဒီကနေ့မှာတော့ မိခင်အတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းလေးကို မပျက်မကွက်လေး ဆုတောင်းပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်..ပရိသတ်ကြီး.။ ဖတ်ရှု့ပေးခဲ့ကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ပျော်ရွှင်သာယာတဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိ်ုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်.။
Source: Ni Ni Khin Zaw’s Facebook
Credit(Cele Active World)
ပရိသတျကွီးရေ အသံကောငျးသူ အဆိုတျောမလေး နီနီခငျဇျောကိုတော့ အထူးအထှေ မိတျဆကျပေးစရာမလိုအောငျ ခဈြခငျရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျ ထငျပါတယျ.။ နီနီခငျဇျောကတော့ သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲမှာ Winner ဆုကို ရရှိခဲ့ပွိးနောကျမှာ အောငျမွငျသူ အဆိုတျော တဈယောကျအဖွဈနဲ့ ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုတှကေို ရရှိပိုငျဆျိုငျထားသူပဲဖွဈပါတယျနျော.။
နီနီခငျဇျောကတော့ သူမရဲ့ တမူထူးကာ ကောငျးလှနျးတဲ့ အသံနဲ့ သီခငျြးကောငျးမြားစှာကို သီဆိုခဲ့ပွီး ထှကျသမြှ သီခငျြးတိုငျးကလညျး ပရိသတျတှကွေားမှာ ရပေနျးစားလူကွိုကျမြားခဲ့တာခညျြးပါပဲနျော.။ သီခငျြးကောငျးတှကေို အမွဲ ခပြွသူ အဆိုတျော ဖွဈသူ နီနီကတော့ The Voice Myanmar သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲအစီအစဉျရဲ့ ဒိုငျလူကွီးတဈယောကျအဖွဈနဲ့လညျး လုပျဆောငျနသေူပါ. ။.
နောကျတကျလာသူ ဂီတ ညီအဈကိုမောငျနှမ အားလုံးကို လကျတှဲချေါကာ အကောငျးဆုံးဖွဈအောငျ တှဲချေါသူ စီနီယာကောငျးဖွဈသူ နီနီကတော့ ဒီကနမှေ့ာကရြောကျတဲ့ သူမရဲ့ မိခငျအတှကျ မှေးနဆေု့တောငျးလေးကို “Happy birthday မမေေ” ဆိုပွီး သူမရဲ့ My Day မှာ တငျလာခဲ့ပါတယျ.။
မိသားစုနဲ့ပတျသကျလို့ သိပျမခတြတျသူ နီနီခငျဇျောက ဒီကနမှေ့ာတော့ မိခငျအတှကျ မှေးနဆေု့တောငျးလေးကို မပကျြမကှကျလေး ဆုတောငျးပေးခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျနျော..ပရိသတျကွီး.။ ဖတျရှု့ပေးခဲ့ကွတဲ့ ပရိသတျကွီးလညျး ပြျောရှငျသာယာတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆျိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ.။